Miteny Hentitra Ny Vehivavy Tiorka: Vatako, Fanapahan-kevitro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2013 3:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Türkçe, Català, Italiano, srpski, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Tamin'ny Febroary lasa, navotsotry ny fitsarana Tiorka [tr] i Fatih Nerede, izay manana tantara ratsy amin'ny heloka bevava sy resaka fanolànana ary halatra, taorian'ny nanolànany vehivavy iray tao Diyarbakir, tanàna iray any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Tiorkia, teo imason'ny zanany vao telo taona monja. Ny antony voalaza fa nanosika ny fitsarana nisahana ilay raharaha hamotsotra azy dia noho ny fanambaràna avy amin'ny sampan-draharaha mitsabo aretin-tsaina izay nilaza tamin'ny fitsarana fa “tsy vita ny hitsara hoe nisy fiantraikany tamin'ny sain'ny niharan'ny fanolànana ve sa tsia ny zava-nitranga, alohan'ny 18 voalana taorian'ny nitrangan'ilay fanolànana.” Mety hanafintohna ity tranga ity saingy indrisy fa tsy vao izao no nisy izany.
Tamin'ny May 2012 [tr], N.Y., tovovavy iray monina ao an-tanànan'i Bitlis any amin'ny faritra atsinanan'i Tiorkia, somary manana tsy fahatomombanana ara-tsaina, no naolan'ny lehilahy iray antsoina hoe S.I. ary nitondra vohoka taorian'ilay tranga. Araka ny nambaran'i N.Y. dia efa im-betsaka izy no naolan'i S.I. ary taorian'ny fanolanana dia nitondra vohoka, izay nafeniny ny fianakaviany ary afa-jaza teo amin'ny faha-enim-bolan'ilay vohoka tsy niriany. Naleviny ny fatin'ilay zazarano. Nomarihany fa natahotra izy no sady norahonan'i S.I. ary io no antony tsy nitantarany ny fanolànana azy na tamin'iza na tamin'iza. Ny renin'i N.Y. no nahatsikaritra ilay zava-doza, satria lasa nanana fitondran-tena nampiahiahy sy hafahafa ny zanany vavy. Ilay sampan-draharaha mitsabo ny aretin-tsaina dia nanomana tatitra iray mikasitra ilay tranga izay mampiseho fa 99% avy amin'ny vokatry ny fitiliana ADN dia i S.I no rain'ilay zazarano maty. Nanipika ihany koa ny Bitlis Psychiatric Hospital fa nisy fiantraikany tamin'i sain'i N.Y. ilay fanolànana. Na teo aza ireo tatitra, sy ny fanambaràn'i N.Y., ny fanapahan-kevitry ny fitsaràna dia ny hoe tsy ampy ny porofo fa hoe nanolana an'i N.Y. i S.I., ka dia noafahana i S.I.
Na dia hoe, ambara ho “manam-bintana” aza ireo vehivavy Tiorka mitaha amin'ireo vehivavy any amin'ireo firenena silamo hafa, dia mbola mafy ny filajian'izy ireo. Araka ny fanadihadiana iray natao tamin'ny 2009, 40% monja amin'ireo vehivavy manambady no izy tenany mihitsy no nifankahita sy nanaiky hanambady ny vadiny. Dimampolo isan-jaton'ireo vehivavy no nisedra fanambadiana namboarina. Io fanadihadiana io ihany no mampiseho fa 35% amin'ireo vehivavy no iharan'ny herisetra ara-batana ataon'ny vadiny, farafahakeliny indray mandeha eo amin'ny fiainan'izy ireo. Any atsinanan'io firenena io, tafakatra ho 40% izany.
Olana iray hafa ho an'ireo vehivavy Tiorka ny tsy fahafahan'izy ireo manana fizakan-tena ara-bola, satria 27% monja amin'ireo hery mpamokatra ao Tiorkia no vehivavy, araka ny tatitry ny TUIK [tr] (Ivon-toerana Tiorka misahana ny Antontanisa). Ary tsy manana solotena mavitrika ao amin'ny antenimiera [tr] ny vehivavy; amin'ireo 548 mpikambana matanjaka ao amin'ny antenimiera, 79 monja no vehivavy. Ary ny vehivavy 46 mpikambana ao amin'ny antenimiera dia avy amin'ny AKP (Antoko ho an'ny Rariny sy ny Fampandrosoana) -antokon'ny mpitondra. Midika izany fa 33 monja amin'ireo vehivavy mpikambana ao amin'ny antenimiera no avy amin'ny mpanohitra – zara raha misy 6% amin'ny fitambaran'isan'ireo mpikambana rehetra ao ao amin'ny antenimiera.
Ny AKP, antoko eo amin'ny fitondràna ao Tiorkia dia nametraka teritery ihany koa ho an'ireo vehivavy tao anatin'ny kabariny sy ny politikan'izy ireo momba ny vehivavy sy ny zon'ny vehivavy. Tamin'ny 2008 [tr], Recep Tayyip Erdogan, Praiminisitr'i Tiorkia, dia niteny toy izao tao anaty fanehoankevitra iray nandritra ny Andro Manerantany Ho an'ny Vehivavy : “Mba hitazonana ny fitomboan'ny isan'ny tanora eto amintsika, miteraha telo raha kely indrindra.”
Tamin'ny 2011 [en], Erdogan dia tezitra tamin'i Dilsat Aktas, vehivavy iray mpanao hetsi-panoherana nihanika fiara mifono vy an'ny polisy ary nodarohan'ny polisy sy nangirfiry noho ny fahatapahana nahazo azy. Nanakiana azy noho ny nanafihany ny polisy izy. Io dia taona iray latsaka taorian'ny daroka nanjo vehivavy iray mpanao hetsi-panoherana[tr] nataon'ny polisy, ary naha-afa-jaza azy, na dia nitalaho tamin'ireo polisy tsy handaka ny ambava-fony aza izy satria bevohoka.
Tany amin'ny faran'ny taona 2012 [en], resabe iray mikasika ny vehivavy indray no nameno ny lohateny vaventy. Nilaza i Erdogan fa “Uludere daholo izay rehetra fanalàn-jaza” tamin'ny fanipihanany ny Uludere na Roboski, araka ny ahafantarana azy any amin'ny Kiorda, toerana nahitàna sivily 34, Kiorda maty noho ny hadisoan'ny Turkish Air Force, fony ireo sivily ireo niampita ny sisintany hanao raharaham-barotra ka noheverina ho mpandroba sy mpampihorohoro. Saingy tsy hoe kabary nanafintohina ho an'ny vehivavy fotsiny io. Nandritra io fotoana io, ny Minisitry ny Fahasalamana dia niresaka momba ny fandraràna ny fanalàn-jaza: “Manontany ny tohin'ny tantara ho an'ny vehivavy voaolana ka mitondra vohoka ve ry zareo? Raha tahaka izany no fandehan-javatra, tokny hiteraka ilay zaza izy, ary raha ilaina dia ny governemanta no manabe ilay zaza.”
Jenny White, bilaogera dia niteny hentitra hoe :
Ny tena manahirana ny saina amin'izy ity dia ny fanarahana lalan-kevitra hoe — raha tsy mitombo ny isan'ny teraka — hanjavona eo amin'ny sarintany i Tiorkia sy ny maha-Tiorka. Io tahotra mampisalobona sy diso toerana io izay mamofompofona ny fomba fanao miaty fanavakavahana fahiny momba ny maha-Tiorka toy ny soy (fitohizan-taranaka, fahamboniana), fitiavan-tanindrazana mifototra amin'ny resaka rà mikoriana ao anaty tahaka ny any Alemaina. Anatinà karazana fomba fijery ny maha-olom-pirenena tahaka izany, tsy misy toerana ho an'ny mpifindra monina sy mpila ravinahitra, na ny vitsy an'isa, eny fa na dia mitovitovy kolontsaina aza ry zareo. Anontanio ireo andian-taranaka Tiorka fahaefatra ao Alemaina.
Andrew Finkel , mpanoratra sy mpinadihady vaovao monina ao Tiorkia dia nanoratra hoe :
Efa nivovo sahady nanaraka ny tenin'ny tompony ny antenimiera Tiokra sy efa maminavina ny hamefy ny kianja mikasika azy io, ary ny fetran'ny fitondrana vohoka ahafahan'ny vehivavy mangataka fanalàn-jaza. Ny fanalàn-jaza malalaka tao Tiorkia tamin'ny 1983 dia ho setrin'ny taha ambonin'ny fahafatesan'ny reny ateraky ny fampitsaharana an-tsokosoko ny fitondrana vohoka. Raha betsaka ny vehivavy no manomboka maty indray noho ny fanerena azy ireo htodika any amin'ny fanalàn-jaza an-tsokosoko, dia mety ho marina mihoatra noho ny niheverana azy ilay fampitahan'i Erdogan tamin'ny vonomoka tao Uludere.
Iray amin'ireo fanehoankevitra tamin'ny lahatsoratr'i Andrew Finkel no nilaza ny maha-zava-doza mamohehatra ny fanambaràna toy ireny :
@AJBaker: Ny matetika hafahafa amin'ireo olona manana toetra mirona amin'ny jadona dia hoe andraikitr'izy ireo hatramin'ny fandrindràna ny maha-lonaka na tsia ny vehivavy iray. Na i Hitler na i Stalin dia samy nandràra ny fanalàn-jaza daholo ary nino fa ny vehivavy dia tokony ho toy ny akoho mpanatody lava.
AncienRose, mpampiasa Twitter, dia nizara tantaranà vehivavy iray izay nanao fanalàn-jaza fony mbla tsy ara-dalàna izany tao Tiorkia. Ilay tantara dia milaza ny hamafy sy ny hirifiry amin'izany fanalàn-jaza tsy ara-dalàna izany, ary ny hahamarina tanteraka ny tenin'ny praiminisitra raha toa hovoaràra ny fanalàn-jaza :
“Uludere daholo izay rehetra fanalàn-jaza”: Tantara iray momba ny fanalàn-jaza fony andron'ny fanalàn-jaza tsy ara-dalàna » Agos http://www.agos.com.tr/makale/her-kurtaj-bir-uluderedir-yasakli-gunlerden-bir-kurtaj-hikyesi-205 … by @AGOSgazetesi
Tsy lany ny lalàna handraràna ny fanalan-jaza noho ireo hetsi-panoherana nanoherana azy io. Ireo hetsi-panoherana dia nihodina tamin'ny tenifaneva iray “benim bedenim, benim kararim (Vatako, Fanapahan-kevitro)” ary natsangana ny tranonkala iray hasiana ireo sarin'ireo olona rehetra avy amin'ny lafivalon'ny tany manohitra ilay fandraràna :
Mivaky hoe “Vatako, Fanapahan-kevitro” eo amin'ny sarin'ny tànam-behivavy iray. Sary nalaina tao amin'ny http://www.benimkararim.org/
Ity lahatsary iray ao amin'ny Youtube, nokarakarain'i incisozluk (sehatra sosialy Tiorka iray fifanakalozan-dresaka ao amin'ny aterineto) ho an'ny hetsi-panoherana ‘Vatako, Fanapahan-kevitro’ :
Manohitra sady miaro ny zony ireo vehivavy Tiorka amin'ny filazàny hoe ‘Vatako, Fanapahan-kevitro.’ Saingy toy ny efa tsinjo sahady fa mbola be ny làlana hodiavin-dry zareo sy ny ady ho atrehany mandra-pahatongan'ny hoe azy ireo 100% ny fanapahan-kevitra ny amin'izy hanaovany ny vatany na ny fiainany.